पौडेल पक्षले सभापति छान्न नसक्नुका भित्री कुरा :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
सहमति नभए चारै जनाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने!
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले सर्वसम्मत सभापति चयन गर्न ‘त्याग’ गरिसक्दा पनि को सभापति हुने भन्ने निर्णयमा पुग्न यो समूहलाई सकस परेको छ।
महाधिवेशन उद्घाटनको संघारमा आइसक्दा पनि सभापतिको उम्मेदवार तय हुन सकेको छैन।
सभापतिमा आकांक्षी रामचन्द्र, शशांक, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला हुन्। रामचन्द्र र शशांकले सहमतिमै सभापति छान्न आफूहरूले छाड्ने बताइसक्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
सभापति पदका चार आकांक्षीबाट दुईमा झरे पनि बुधबार बिहानदेखि बेलुकीसम्म पटकपटक भिन्नभिन्न ठाउँमा भएका बैठकले कुनै निचोड निकालेको छैन।
बरू अब युवा नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेका छन्। मुख्यगरी प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालामा अहिले कुरा अड्किएको छ- कसले कसलाई सभापति छाड्ने भन्नेमा।
सिंह यसपालि जसरी पनि सभापति उठ्न चाहेका छन्। उनले सिंहदरबारअगाडि यलम्बर पार्टी प्यालेस नै भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय खोलेर भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।
शेखर १३ औं महाधिवेशन सकिएलगत्तैदेखि नै जिल्लाहरू घुमेर १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उठ्न तयारी गरिरहेका थिए।
प्रकाशमान र शेखरबीच एकअर्कालाई छाड्ने विषयमा टसमस नहुँदा बिहीबार साँझ सिंह निवास चाक्सीबारीमा चर्काचर्कीसमेत भयो।
सिंहले जहिले पनि आफूहरूले नै त्याग गरिराख्नुपर्ने हो भनेर नेताहरूलाई प्रश्न तेर्साउने गरेका छन्। शेखर पनि आफू यसपालि सभापति उठ्ने बताइरहेका छन्।
उनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन पौडेल र शशांकलगायत नेताले कोशिस गरिरहेको देखिन्छ तर अहिले नै सहमति जुट्ने अवस्था देखिएको छैन।
सर्वसम्मत सभापति छान्न पौडेल पक्षले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशमा जितेका सभापति र उम्मेदवार, जिल्ला सभापति, निवर्तमान जिल्ला सभापति र केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग पनि राय लिएको हो, तर उपाय लागेन।
जिल्ला सभापतिहरू त विवादमा आउन चाहेनन्। बत्तिसपुतलीमा बिहीबार बिहान भएको भेलामा उनीहरूले सभापतिको नाम भन्न चाहेनन् र आफूहरूलाई विवादमा नतान्न शीर्ष नेतालाई आग्रह नै गरेका थिए। ‘बरू उनीहरूले तपाईंहरू नै निर्णय गर्नुस् हामी स्वीकार्छौं पो भने,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
सभापतिमा चार आकांक्षीमध्ये को बलियो भन्नेमा भोटिङ गर्ने चर्चा पनि भएको थियो। तर उक्त बैठकमा शेखर कोइराला पक्षका धेरै मानिस रहेको ठानेर त्यो विकल्पमा नेताहरू गएनन्।
‘पौडेल समूहलाई एक ढिक्का राख्ने भनेर सर्वसम्मत सभापति उम्मेदवार खोज्ने भनिएको हो। भोटिङ गरेर एक नेता छान्ने हो भने त झन् यहीँभित्र चार गुट बन्ने सम्भावना देखिन्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यो विधि जिल्ला सभापतिहरूले मानेनन्। विग्रह हुन्छ, सन्देश राम्रो जाँदैन भने।’
सभापतिमा आफू नै बलियो रहेको सभापतिका आकांक्षीहरूको आ-आफ्ना दाबी छन्। पौडेलले एक कार्यकाल आफैँलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए तर नेताहरूले नमानेपछि उनले सहमति हुन्छ भने म छाड्छु भनिरहेका छन्।
‘पौडेललाई यो समूह नै छिन्नभिन्न हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले उहाँ आफू नउठेर पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार छान्न प्रयासरत हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘यो समूहबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुनेवित्तिकै देउवालाई सर्लक्कै सभापति सुम्पिदिए हुन्छ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रकाशमान र शेखरलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूबीच बैठकमा कहिले हाँसो ठट्टा पनि हुन्छ त कहिले चर्काचर्की पनि! प्रकाशमान र शेखर एकअर्कालाई छाड्न नमानेपछि बिहीबार साँझ पौडेलले ‘आफूलाई राजनीतिबाटै बिदा दिन’ आग्रह समेत गरेका थिए।
पावर सेयरिङमा मिल्न सक्छ कुरा!
प्रकाशमान र शेखरबीच पहिलेदेखि नै भेटवार्तामा पावर सेयरिङका कुरा उठ्ने गरेका थिए। यी दुई नेताहरू सर्वसम्मत सभापति उम्मेदवार हुने विन्दुमा उभिए भने त्यसबेला पावर सेयरिङमा लिखित सहमति हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
पावर सेयरिङ हुन सक्नेमा सिंह र कोइराला पनि छन्। ‘एक जना सभापति हुने र अर्कोलाई प्रधानमन्त्री छाडेर पावर सेयरिङ गर्ने विन्दुमा उनीहरू एक हुन सक्छन्,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
पौडेललाई टिम एक राख्ने चुनौती
वरिष्ठ नेता पौडेल भने टिमभित्रै द्वन्द्व थप बढाएर लैजाने पक्षमा छैनन्। सकेसम्म सर्वसम्मत सभापति छान्न सके टिम एक रहने विश्वास उनको छ।
‘शशांकले रामचन्द्र दाइका लागि मैले सभापतिको दाबी छाडेँ भनेका थिए। तैपनि रामचन्द्रले म नै सभापति हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेनन्, लचिलो भइरहेका छन्। उनलाई यो टिम भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ,’ उनीनिकटक एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
टिमभित्र सहमति नभई सभापतिमा एक जना निर्णय गर्दा ‘घात’ हुन सक्नेमा उनी सचेत रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे। ‘सभापतिका आकांक्षीबीच असन्तुष्टिबीच नै सभापतिमा यो हो उम्मेदवार भन्न सक्ने हस्तक्षेपकारी भूमिकामा कोही देखिँदैनन् किनकी असन्तुष्ट पक्ष अर्को समूह (देउवा) सँग नजिकिन सक्छ यसले त टिममाथि घात गर्छ,’ ती नेताले भने।
युवा नेताले हस्तक्षेप गर्ने, नमाने के गर्ने?
सभापतिका आकांक्षी मुख्यगरी प्रकाशमान र शेखरबीच कुरा नमिलेको अवस्थामा युवा केन्द्रीय सदस्यले हस्तक्षेप गर्ने भएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरेले सभापतिका आकांक्षीबाहेक पौडेल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू बिहीबार बिहान छलफल गरेर सभापति उम्मेदवारको नाम शीर्ष नेतालाई दिने बताउँछन्।
‘सभापतिको नाम र आधारसमेत हामी दिन्छौं,’ उनले भने। तर यो नाम सभापतिका आकांक्षीले स्वीकार गरेनन् भने के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन, त्यसैले नाम किटान नै गरेर बुझाउन पनि जोखिम देखिएको छ।
पौडेल नै उम्मेदवार हुन सक्ने!
प्रकाशमान र शेखरबीच एकले अर्कोलाई सभापति नछाड्ने हो भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै नाममा सहमति हुन सक्ने चर्चासमेत भइरहेका छन्।
‘यो समूहका चार जनामा जसले जे भने पनि तलैदेखि पौडेलका नाममा नेताहरू जितेर आएका छन्। पौडेलले सहमति हुन्छ भने छाड्छु भनेर उदारता देखाइसके। सहमति नगर्ने हो भने उनी नै अगाडि बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
तर पौडेल उठेमा प्रकाशमान र शेखर पनि उठ्न सक्ने जोखिम देखिएको उनको तर्क थियो।
कुरा नमिले चारै जनाको मनोनयन, त्यसपछि सहमति प्रयास
सभापतिमा सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्न नसकेको अवस्थामा यही मंसिर २५ गते सभापति पदमा रामचन्द्र, शशांक, प्रकाशमान र शेखरले उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने एक नेताले बताए।
‘उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि पनि फिर्ता लिन एक दिनकै समय छ। त्यो बेलासम्म पनि यो समूहबाट एक मात्र उम्मेदवारको खोजी भने भइरहनेछ, पहल जारी रहनेछ,’ ती नेताले भने।
नेतृत्व पुस्तान्तरण हुने कार्यकर्ताको आशा
प्रकाशमान वा शेखरमध्ये जो सभापतिको उम्मेदवार भए पनि नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुन सक्ने आशा देखिएको उनीपक्षका नेता तथा कार्यकर्ता तर्क गर्छन्।
प्रकाशमान र शेखरमध्ये एक सभापति उम्मेदवार हुँदा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूसम्म युवा पुस्ता आउने दाबी कांग्रेसका एक युवा नेताको छ।
‘सभापतिमा अर्को पक्षले देउवालाई नै निर्विकल्प अगाडि सारिसके। जित्नका लागि यो पक्षले युवालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। निर्णायक महाधिवेशन प्रतिनिधि युवा नै आएका छन् उनीहरूले पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा आफू नभए आफ्नो पुस्ताका अनुहार खोज्छ,’ ती नेताले भने।
सभापति पदमा को लड्ने भन्ने निश्चित नहुँदा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीलगायतका उम्मेदवार छान्न पनि समय लाग्ने देखिएको छ। कांग्रेसमा कोषाध्यक्षबाहेक अरू पदाधिकारीमा र १६७ मध्ये १३४ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, ००:०१:००